'वर्किंग हलिडे' भिसा के हो र हामी किन यसमा रुचि राख्छौं? | यात्रा समाचार
'वर्किंग हलिडे' भिसा के हो र हामी किन यसमा रुचि राख्छौं?
कारमेन गुइलन | | सुझावहरू, यात्रा
तपाईं मध्ये कोही यो लेखको शीर्षक पढ्दा सोच्न सक्नुहुन्छ, सम्बन्ध जुन भिसा कार्डले हाम्रो सामान्य यात्रा लेखहरूसँग गर्न सक्दछ। ठीक छ, वास्तवमा, यससँग यससँग धेरै गर्न बाँकी छ! सबैभन्दा माथि, यो ती यात्रुहरूका लागि डिजाइन गरिएको हो जसले, छनौट गरिएको गन्तव्यमा राम्रो बसाई खर्च गर्नुको अलावा त्यहाँ काम गर्ने अवसरको फाइदा लिन चाहन्छन्।
यदि तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ के काम गर्ने छुट्टी भिसा र तपाइँ यसलाई कसरी प्रक्रिया गर्ने भनेर जान्न चाहानुहुन्छ, त्यसपछि हामी तपाइँलाई यसको बारेमा बताउँछौं र हामी सबै चरणहरू सूचित गर्नेछौं।
1 काम गर्ने छुट्टी भिसा के हो?
1.1 आवश्यकता के हो?
1.2 के तपाईंलाई भाषा जान्नु आवश्यक छ?
1.3 तपाईंले कहिले यो अनुरोध गर्नु पर्छ?
1.4 के तपाइँ लागू गर्न एक पूर्ण वर्ष रहनु पर्छ?
1.5 तपाईं कसरी काम पाउन सक्नुहुन्छ?
1.6 के तपाईं महाद्वीपमा काम गर्न सक्नुहुनेछ?
काम गर्ने छुट्टी भिसा के हो?
यो भिसाको विशिष्ट प्रकार हो तपाईंलाई काम गर्न र देशमा रहन अनुमति दिन्छ तपाई के छनौट गर्नुहुन्छ पूरा १२ महिनाको लागि। यस अवधिमा, तपाईं प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईं चाहानुहुन्छ धेरै पटक देश छोड्न सक्नुहुन्छ।
तलका रेखाहरूमा हामी यस भिसा कार्डको बारेमा प्राय: जसो प्रश्नहरूको उत्तर दिनेछौं ताकि तपाईंलाई यसको प्रक्रियाहरू र यसमा दिइने आवश्यकताहरूको बारेमा कुनै शंका छैन।
आवश्यकता के हो?
यी तिनीहरू तपाईले पहुँच गर्न चाहानु भएको देशमा निकै निर्भर हुनेछन्। उदाहरणका लागि, अर्जेन्टिनासँग न्यूजील्याण्ड, अष्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, पोर्तुगल, फ्रान्स, स्विडेन, डेनमार्क, आयरल्याण्ड र नर्वेसँग सम्झौता छ। तपाईं कहाँबाट आउनुभयो र कहाँ यात्रा गर्न चाहानुहुन्छ त्यसमा निर्भर रहनुहोस्, तपाईंले यस बारे आफैंलाई सूचित गर्नु पर्छ।
यो अनुरोध गर्न सक्षम हुन तपाईं १ 18 र years 35 वर्ष बीचको हुनुपर्दछ (यद्यपि यो डाटा हो जुन देशमा निर्भरताका साथै अस्थिर हुन पनि सक्छ)। सामान्यतया, उनीहरूले तपाईलाई चाहिएको रोजगार पाउनको लागि देशमै रहनको लागि आर्थिक कोषहरू रहेको प्रमाणित गर्न सोध्छन्, तपाईको फिर्ती टिकट किन्नको लागि र कुनै पनि स्वास्थ्य घटनाहरू हुन सक्ने स्वास्थ्य बीमा लिन। उनीहरूले यो पनि सुनिश्चित गर्छन् कि तपाईंसँग अपराधिक रेकर्ड छैन।
के तपाईंलाई भाषा जान्नु आवश्यक छ?
यो गन्तव्य मा निर्भर गर्दछ। अष्ट्रेलियामा, उदाहरणका लागि, तिनीहरूले तपाइँलाई एक अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षाको साथ तपाइँको अंग्रेजीको स्तर प्रमाणित गर्न सोध्छन्। यद्यपि केहि स्थानहरूमा यो कडाइका साथ आवश्यक छैन, तपाई जहाँ जान चाहानुहुन्छ भन्ने भाषाको मूल धारणा राख्नु राम्रो हुन्छ। यो तपाईं एक पटक तपाईं आइपुग्दा राम्रो काम गर्न र सुरुमा केही समस्या र गलतफहमीबाट बच्न मद्दत गर्दछ।
र यदि होईन भने, अंग्रेजी, अन्तर्राष्ट्रिय भाषा बुझेर, तपाईलाई सबै देशहरुमा चीजहरु सहज बनाउँदछ।
तपाईंले कहिले यो अनुरोध गर्नु पर्छ?
कोटा वर्षमा एक पटक नवीकरण गरिन्छ र देशको आधारमा तीन फरक कुरा हुन सक्छ: त्यो सीमित छ र ती अनुरोधहरू खोल्नको दिन पछि नै बेचिन्छन्, कि तिनीहरू असीमित छन्, वा तिनीहरू सीमित छैनन् तर उनीहरूसँग धेरै माग छैन र तिनीहरू यति छिटो बेच्दैनन्।
के तपाइँ लागू गर्न एक पूर्ण वर्ष रहनु पर्छ?
जहाँसम्म कुल १२ महिना भिसा दिइन्छ, यो पूरै बर्ष रहन आवश्यक छैन, तर तपाइँ कम समय रहन सक्नुहुन्छ यदि यो तपाइँले चाहानुहुन्छ भने। जे होस्, हामी सुझाव दिन्छौं र सुझाव दिन्छौं कि तपाईंले यो अवसरको फाइदा लिनुहोस् जुन तपाईं उपलब्ध जीवनका प्रत्येक गन्तव्यहरूमा तपाईंको जीवनमा एक पटक मात्र पाउन सक्नुहुनेछ।
तपाईं कसरी काम पाउन सक्नुहुन्छ?
दुबै काम र आवास गन्तव्यमा खोज्नु तपाईंको आफ्नै उत्तरदायित्व हुनेछ। सबै भन्दा राम्रो र सजिलो कुरा हो यदि तपाईं ठाउँमा कुनै चिन्नुहुन्छ भने जुन तपाईं जानुहुन्छ। यसले तपाईलाई बताउन सक्दछ जुन कुन क्षेत्रमा पहुँचयोग्य सबैभन्दा धेरै कामहरू तपाईले यस क्षेत्रमा भेट्टाउन सक्नुहुनेछ।
यदि, अर्कोतर्फ, तपाईं कसैलाई चिन्नुहुन्न भने, हामी तपाईंलाई केही प्रविष्टि गर्न सुझाव दिन्छौं को समूह फेसबुक त्यहाँ धेरै जसमा यात्रीहरूले विशिष्ट जानकारी साटासाट गर्छन् र मद्दत वा आवास दिन्छन्। उनीहरूले तपाईलाई देश र अनुभव दुबै सहअस्तित्व र कार्यको लागि पनि अनुभव दिनेछन्।
के तपाईं महाद्वीपमा काम गर्न सक्नुहुनेछ?
तपाईंले भिसाको लागि आवेदन गरेको देशमा मात्र काम गर्न सक्नुहुनेछ। उदाहरणको लागि, यदि तपाईंसँग अर्जेन्टिना भिसा छ भने, तपाईं अमेरिकी महाद्वीपमा यात्रा गर्न सक्नुहुनेछ तर तपाईं केवल अर्जेन्टिनामा मात्र काम गर्न सक्नुहुनेछ।
यदि तपाईंसँग यसको बारेमा कुनै अन्य प्रश्नहरू छन् भने, तपाईं तिनीहरूलाई हाम्रो टिप्पणीहरू सेक्सनमा सोध्न सक्नुहुन्छ। हामी यसलाई समाधान गर्न सक्षम हुन पाउँदा खुसी हुनेछौं। याद गर्नुहोस् कि प्रत्येक देशको आफ्नै आवश्यकताहरू हुन्छ, केहि योजना बनाउनु अघि राम्रोसँग पत्ता लगाउनुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » यात्रा » 'वर्किंग हलिडे' भिसा के हो र हामी किन यसमा रुचि राख्छौं?
Tropea, इटालियन रत्न